I-Jamaica Imemezela Izinkonzo Zomoya Ezintsha kusukela eStockholm kuya eMontego Bay
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zaseJamaica » I-Jamaica Imemezela Izinkonzo Zomoya Ezintsha kusukela eStockholm kuya eMontego Bay
Airlines • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • I-Caribbean • Izindaba zikaHulumeni • Industry Hospitality Industry • Izindaba zaseJamaica • Izindaba • Sweden Izindaba Ezintsha • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba
UMhlonishwa. U-Edmund Bartlett, uNgqongqoshe Wezokuvakasha wase-Jamaica - Isithombe sihlonishwa yi-Jamaica Tourism Ministry
UMhlonishwa. U-Edmund Bartlett, uNgqongqoshe Wezokuvakasha, uthe: “Sijabule ngesinqumo se-VING sokuphinda baqale kabusha izindiza eziya eJamaica ebusika obuzayo. Sikhuthazwa ukuthembela kwabavakashi endaweni yethu, futhi isevisi yabo yokuqasha izokwandisa kakhulu izivakashi zase-Swedish, ezivame ukuhlala esiqhingini ubusuku obuyi-14. Uqhube wathi, 'selokhu savula kabusha imingcele yethu ehlobo eledlule, indawo yethu iqhubekile nokwamukela izivakashi ngokuphepha nangokukhululekile. Sizilungiselele futhi siqinile futhi siye saqikelela ekulungiseleleni izivakashi emhlabeni wangemva kwe-COVID-19. Umkhakha wezokuvakasha waseJamaica iyaqhubeka nokuhola imizamo yokuvuselela umnotho walesi siqhingi, futhi kuyangithokozisa ukubika ukuthi senza inqubekelaphambili eqhubekayo ukuze silulame ngamandla.”
UDonovan White, uMqondisi Wezokuvakasha, uvumile: “Kuphephile ukusho ukuthi ezokuvakasha ziya ngokuya zikhula futhi isidingo seJamaica siphezulu. Sijabule kakhulu ngokuthi abaqhubi bezokuvakasha njenge-VING bakholelwa endaweni okuyiwa kuyo e-Jamaica futhi sibheke ngabomvu ekwamukeleni abagibeli babo, ukuze bajabulele okuhlangenwe nakho okungasoze kwalibaleka kwe-Jamaican endaweni ephephile, engenamthungo nevikelekile.”
UClaes Pellvik, oyiNhloko yezokuXhumana eNordic Leisure Travel Group, uthe: “Iqembu laseNordic Leisure Travel lijabule ngokubuyela eJamaica futhi nezindiza ezingami eStockholm-Monttego Bay ngesizini ezayo yasebusika 22/23, ikakhulukazi kusukela ekuqaleni kwethu. impendulo yamakhasimende ibilokhu iyinhle kakhulu ohlelweni lwethu lwaseJamaica. Okusha ukuthi sizosebenzisa i-Airbus A330-900neo yethu entsha ku-Sunclass Airlines yethu. Le ndiza yesimanje izonciphisa ukukhishwa kwe-CO2 ngo-23%, futhi ngesikhathi esifanayo ithuthukise ulwazi lwabagibeli. Sibona i-Jamaica iyindawo ekahle yekusasa lapho igxila khona enhlalakahleni, inqwaba yemisebenzi ethokozisayo namasiko ongawahlola, kanye nomkhiqizo wamahhotela omuhle otholakalayo.”
I-Jamaica ibilokhu yamukela izivakashi zase-Swedish kusukela imingcele yavulwa kabusha ngoJuni 2020. Zonke izihambi ezineminyaka engu-12 nangaphezulu zidinga ukukhombisa ubufakazi bokuhlolwa okungeyikho kwe-antigen okwenziwa ilebhu egunyaziwe zingakapheli izinsuku ezintathu zohambo. Ukuhlolwa kwasekhaya akwamukelekile. Abahambi futhi kudingeka bagcwalise ifomu elilula lokugunyaza uhambo ngaphambi kokuba bafike, elifinyeleleka ngalo travelauth.visitjamaica.com.
Imithetho ebanzi yezempilo nokuphepha yase-Jamaica, ethuthukiswe ngokubambisana neziphathimandla kuyo yonke imikhakha yezempilo neyokuvakasha, yaba phakathi kwezokuqala ukwamukela ukuqashelwa koMkhandlu Wokuvakasha Okuvikelekile Kohambo Lomhlaba Lokuhamba Nezokuvakasha.